Project LiveSlak: Mhanya Slackare Mifananidzo Mhenyu | Linux Vakapindwa muropa
El Project LiveSlakMuchiitiko chekuti iwe hauzive icho, chirongwa icho iwe chaunogona kumhanyisa ikozvino GNU / Linux Slackware mifananidzo yekuparadzira muLive mode pamwe kana pasina kushingirira uye kunyange kuiisa kana iwe uchinzwa sekuda kwayo. Kana iwe uchifarira, unogona kuwana iyo Website kurodha pasi. Uye chirongwa ichi chine zvakawanda zvekuita naEric Hameleers, kuti kana iwe uri muteveri akatendeka wenyika yeLinux, iwe unonyatso ziva, sezvo aine inonakidza blog rake rakazvitsaurira kuSlackware.
Asi iye zvakare anotora chikamu mumabasa akakosha ekupa akafanorongedzwa mapakeji eiyi distro, Ktown repository yeakagadziridzwa KDE4 uye Plasma mapakeji, uye chirongwa chake Slackware Rarama zvichibva payo pachayo LiveSlak zvinyorwa zvekuvapa kubata kwavo uye nekupa vashandisi mukana wekumhanyisa Slackware vasina kuiisa pakombuta yedu uye nekudaro uwane zano rekuti vhezheni itsva yeSlackware ichave yakaita sei muRarama mode.
Iwe unotoziva kuti muna Chikumi 25, 2018 yakateedzana mifananidzo yeSlackware, Rarama ISOs ye32-bit uye 64-bit, ine Xfce uye KDE4 desktop nharaunda yezvivakwa zvese, kunyangwe iwe uchizowanawo mimwe mifananidzo ine MATE, Plasma 5 iyo inongowanikwa chete kune 64-bit. Iyo Cinnamon vhezheni yandaive nayo pakutanga inoita kunge yasara kumashure ... Asi masystem aya haagone chete kushandiswa muRarama mode.
Zvinonyanya kufadza kana tichiziva kuti dzinogona kuiswa pamidziyo yedu kutipa ruzivo rwakakwana uchishandisa zvinyorwa se iso2usb.sh uye kana iwe uine mufananidzo wekare haugone kuiswa zvakakwana, unongogadziridza mapakeji uye kernel, asi haugadzirise chero kumisikidza kwatakaita kare. Uye kugadzirisa chete kernel iwe yaunogona kushandisa iyo upslak.sh script. Unogona kumhanya zvese kubva kuchiteshi uye uchavawana mune iyi link yandakakusiya mundima yekutanga ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Project LiveSlak: Mhanya Mhenyu Mifananidzo kubva kuSlackare
Cryptmount: Chishandiso chekugadzira mafaira akavharirwa muLinux